Ahoana no ahafahako manampy ny tenako raha marary amin'ny coronavirus COVID-19 aho?
Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Ahoana no ahafahako manampy ny tenako raha marary amin'ny coronavirus COVID-19 aho?
Ireo mpikaroka mpikaroka malaza dia miasa mandritra ny ora rehetra mba hanomezana torolàlana momba ny fomba hikarakarana tsara indrindra ny tenanao raha mieritreritra ianao fa marary COVID-19 coronavirus.
Ny fandalinana dokotera momba ny COVID-19 dia navotsotra haingana, ary matetika dia niteraka fisafotofotoana noho ny raharaha tsotra toy ny mpanala fanaintainana alaina, na ny fomba hikarakarana ireo mpianakavy marary ao an-trano.
Ho fitarihana, nitodika tany amin'ny dokotera sy mpikaroka manerana an'i Etazonia sy Kanada ny National Geographic noho ny tolo-kevitr'izy ireo momba ny fikarakarana an-trano, ary koa ny fotoana hitadiavana mpitsabo.
Dokotera enina no manazava ny zavatra fantatsika hatreto fitsaboana COVID-19 ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny sy ao an-trano.
FOMBA FOMBANANA ISAN-MASINA
Ny vaovao tsara dia ny 80 isanjaton'ny tranga COVID-19 rehetra dia tsy mampiseho soritr'aretina malefaka na antonony fotsiny izay tsy mila fampidirana hopitaly. Manoro hevitra ny dokotera ny tenany fa tokony hitokantokana ireo marary ireo, hijanona ho hydrated, hisakafo tsara ary hitantana ny soritr'aretina araka izay azony atao.
Ho fitsinjovana ny tazo mifandraika amin'ny aretina maro, anisan'izany ny COVID-19, ny dokotera dia manolo-kevitra ny handray acetaminophen - fantatra amin'ny sehatra iraisam-pirenena ho paracetamol - alohan'ny ibuprofen. Raha maharitra ny tazo dia tokony handinika ny famindrana amin'ny ibuprofen ny marary, hoy i Julie Autmizguine, manam-pahaizana manokana momba ny areti-mifindra zaza ao amin'ny CHU Sainte-Justine any Montreal, Canada.
Izy sy ny dokotera hafa dia maneho an'io fitiavany io satria ny ibuprofen sy ny fanafody mifandraika amin'izany - antsoina hoe NSAID raha fintinina — dia mety hisy vokany ratsy amin'ireo marary amin'ny COVID-19 coronavirus, ao anatin'izany ny ratra voa, fery amin'ny vavony, ary mandeha lalan-dra.
Na izany aza, ity fampitandremana ity dia tsy midika hoe manimba ny valin'ny virus ny ibuprofen sy ny NSAID, satria nilaza ny herinandro lasa teo taorian'ny filazan'ny Minisiteran'ny Fahasalamana frantsay fa tokony hialana ireo fanafody mandritra ny fitsaboana COVID-19.
"Tsy fantatro fa ny NSAID dia naseho fa olana ratsy amin'ity aretina ity na amin'ny coronavirus rehetra", hoy ny manam-pahaizana momba ny coronavirus, Stanley Perlman, dokoteran-jaza sy mpitsabo aretin-tsaina ao amin'ny University of Iowa's Carver College of Medicine.
Ny acetaminophen dia misy loza ihany koa, ary ny olona dia tokony hihinana azy raha tsy tsy mahazaka azy izy ireo na tsy manana fahasimban'ny atiny. Ny fanafody dia azo antoka amin'ny fatra isan'andro isan'andro latsaky ny 3,000 milligrams, fa ny fihoarana an'io farafahakeliny isan'andro io dia mety hitera-doza amin'ny aty na ratsy kokoa.
"Ny fatran'ny acetaminophen no antony matetika mahatonga ny tsy fahombiazan'ny aty aty Etazonia", hoy i José Manautou, mpandinika toksika ao amin'ny University of Connecticut School of Pharmacy.
Ny olona dia tokony hanao izay hahazoana antoka ny amin'ny fanafody rehetra laniny, satria ireo fanafody tsy voavidim-bola izay mikendry soritr'aretin'ny gripa ary ny fanampiana amin'ny torimaso dia misy acetaminophen matetika. Tokony tsy hisotro zava-pisotro misy alikaola koa ny olona rehefa mihinana acetaminophen. Ny atiny dia miankina amin'ny akora iray ihany - glutathione - mba hifehezana ny potika misy poizina avy amin'ny alikaola sy acetaminophen. Raha mihinana be loatra amin'ny roa ianao dia mety hiteraka poizina manangona ao amin'ny vatana izany. (Raha vao voan'ny virus ny vatanao dia izao no ataon'ny coronavirus.)
AHOANA NY CHLOROQUINE SY AZITHROMYCIN?
Ekipa mpitsabo dia miasa tsy an-kijanona hianatra ny fomba hitsaboana tsara ny COVID-19, ary nandritra ny herinandro lasa teo dia niditra an-tsehatra ny filoha amerikana Donald Trump tamin'ny alàlan'ny fanamafisany ny fanohanany ireo fanafody roa efa am-polotaona maro — ny azithromycin antibiotika, ary ny kinovan'ny ny chloroquine antimalarial drug.
Raha ny marina, ny US Food and Drug Administration dia tsy nankatoavin'ny hydroxychloroquine - izay matetika ampiasaina amin'ny fitsaboana ny vanin-taolana rheumatoid sy lupus - ampiasaina amin'ny COVID-19, na dia nankatoaviny aza ny fitsapana miaraka amin'ny azithromycine izay natokana ho any New York. Mandritra izany fotoana izany, ny tompon'andraikitra amin'ny fahasalamana eran'izao tontolo izao, anisan'izany i Anthony Fauci, lehiben'ny Ivon-toerana Amerikanina misahana ny allergy sy ny areti-mifindra.
"Ny ankamaroan'ny zavatra henonao any dia izay nantsoiko hoe tatitra anecdotal," hoy i Fauci tamin'ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny sabotsy teo ho an'ny vondron'orinasa White House coronavirus. "Ny asako dia amin'ny fanaporofoana amin'ny farany tsy misy fisalasalana fa ny fanafody dia tsy hoe azo antoka, fa tena mandeha."
Ny fitantarana chloroquine dia natomboka tamin'ny fandalinana kely maromaro avy tany Chine sy France - samy manana ny lesoka ary tsy manome lesona firy ho an'ny marary amin'ny ankapobeny. Miorina amin'ny olona 36 fotsiny ny valiny frantsay ary mifantoka amin'ny vesatry ny viralin'ny marary, na ny habetsaky ny virus ao amin'ny vatana. Eny tokoa, ireo marary tokana maty na nalefa notsaboina mafy tamin'ny fanadihadiana frantsay dia naka hydroxychloroquine.
"Tsy manana angon-drakitra avy amin'ny fitsapana tsy voafehy sy voafehy izahay milaza aminay ny fomba fiasan'ny chloroquine amin'ny olona tena izy," hoy i Annie Luetkemeyer, manam-pahaizana momba ny VIH sy areti-mifindra ao amin'ny University of California, San Francisco, Departemantan'ny fitsaboana.
Ny fitsaboana samirery amin'ny hydroxychloroquine sy azithromycin ho an'ireo marary amin'ny COVID-19 coronavirus dia mety hitranga amin'ny loza, satria ireo fanafody roa ireo dia mety hanamafy ny fo ary hampitombo ny mety hisian'ny arrhythmia. Ny alatsinainy lasa teo dia nivoady ny filoha fa handefa dosie an'arivony an'arivony New York ho an'ny fitsapana ny dokotera, tsy ela taorian'ny nanambaran'ny hopitaly iray Arizona fa maty ny iray tamin'ireo marariny taorian'ny fitsaboana azy manokana tao amin'ny chloroquine phosphate, karazana fitambarana ampiasaina hanadiovana aquarium fiara mifono vy. Ny tompon'andraikitra ara-pahasalamana nizeriana dia nitatitra tranga roa momba ny fihoaram-pefy chloroquine tamin'ny faran'ny herinandro.
"Ny zavatra farany tadiavinay dieny izao dia ny fanondrahana ireo sampana vonjy taitra miaraka amin'ireo marary izay mino fa nahita vahaolana manjavozavo sy mampidi-doza mety hanohintohina ny fahasalaman'izy ireo," Daniel Brooks, talen'ny fitsaboana ao amin'ny Banner Poison sy ny Ivotoerana fampahalalana momba ny zava-mahadomelina any Phoenix , hoy ny fanambarana nataony.
SAFE azo antoka ve ny fitsaboana amin'ny tsindry ra?
Ireo mpanohitra ACE, ireo fanafody izay ampiasaina betsaka amin'ny fitsaboana ny tosi-dra, dia nirehitra ihany koa nandritra ny krizy COVID-19, miaraka amin'ny tatitra sasany milaza fa tokony hitsahatra tsy mihinana ireo fanafody ireo ny marary raha toa ka voan'ny soritr'aretina.
Tao anatin'ny andiany taratasy tao amin'ny British Medical Journal, Nature Review Cardiology, ary The Lancet Respiratory Medicine, nametraka fanontaniana ny mpikaroka raha toa ka afaka manampy amin'ny fametahana aretina coronavirus amin'ny havokavoky ny mpanohitra ACE. Ny ahiahy dia avy amin'ny zava-misy fa ny SARS sy ny coronavirus vaovao dia miditra amin'ny sela amin'ny alàlan'ny fametahana proteinina antsoina hoe angôniômainina miova angiotensin 2, na ACE2 raha fintinina. Ny proteinina dia be dia be eo amin'ny sehatry ny sela ao amin'ny fo sy ny havokavoka, izay manampy amin'ny fifehezana hormonina iray izay misy fiantraikany amin'ny fihenan'ny tosidra.
Ny vokatra iray amin'ny mpanakanana ACE dia ny mety hanosika sela hamorona ACE2 bebe kokoa. Ny fandinihana natao tamin'ny 2005 dia nahita porofon'ny fiakaran'ny totozy toy izany, ary ny fandinihana ny olombelona tamin'ny 2015 dia nahitana fiakarana ACE2 nitombo tao amin'ny urine ny marary izay nihinana fanafody mifandraika amin'ny ACE inhibitors.
Saingy tsy misy porofo ankehitriny fa manakana ny valin'ny COVID-19 amin'ny olombelona ny mpanakana ACE, hoy ny American Heart Association, ny European Society of Cardiology's Council on Hypertension, ary ny 20 martsa navoaka tao amin'ny European Heart Journal. Ny torohevitry ny dokotera dia ny hoe raha efa nomena fanafody ianao dia manohiza mandra-pahatongan'izay lazain'ny mpitsabo anao.
"Tsy tokony hanomboka na hijanona amin'ireo fanafody ireo isika mandra-pahatongantsika manana fampahalalana bebe kokoa," hoy i Luetkemeyer.
Ireo olona voan'ny tosidra sy aretim-po dia toa ahiana ho voan'ny COVID-19, saingy mety misy ifandraisany bebe kokoa amin'ireo aretina miteraka azy ireo. Ankoatr'izay, ny mpanohitra ACE dia mety manana toetra manohitra ny inflammatoire, izay mety hanampy ny havokavoky ny marary COVID-19 hiatrika tsara ny aretina. (Fantaro ny fomba mahatonga ireo coronavirus ho mafy kokoa.)
"Izany dia ho fanadihadiana lehibe iray, hampitahana ny olona voan'ny tosidra ambony na mihena ireo fanafody ireo, hahitana raha misy fahasamihafana," hoy i Perlman. “Saingy sarotra be ny manao azy, ary angamba tena sarotra ny manamarina ny etika.”
REHEFA MBOLA HITADIHAIN'NY DADIKA
"Na izany na tsy izany, raha sendra soritr'aretina miaina maika ianao na manahirana zavatra iray, dia tianay ianao hitady vonjy maika," hoy i Purvi Parikh, manam-pahaizana momba ny areti-mifindra sy mahazaka aretina ao amin'ny NYU Langone any New York City. Raha misafidy ny hangataka fanampiana any amin'ny hopitaly eo an-toerana ianao dia ity misy ohatra iray mety hitranga.
Tao amin'ny hopitaly lehibe an'ny Inova Health System any Fairfax, Virginia, dia nanangana tranolay ivelany ny mpiasa mba hampisaraka ny olona mitatitra aretin'ny taovam-pisefoana amin'ireo izay manana aretina hafa. Ireo vondrona roa ireo dia voahodina amin'ny faritra samihafa amin'ny efitrano fiandrasana, ary atokana enina metatra farafahakeliny no atokana.
Noho ny tsy fahampian'ny fitsapana manerana an'i Etazonia dia nilaza ny dokotera ao Inova sy ny hopitaly hafa fa raha tonga miaraka amin'ny soritr'aretina malemy ny olona dia asaina mihevitra ireo marary ireo fa manana COVID-19 izy ireo ary ampirisihina hanao quarantine hisorohana ny tsy fandoavana be loatra ny firenena 920,000. fandriana mpiasa.
Ho an'ireo izay mararin'ny coronavirus COVID-19 ary tonga miaraka amina soritr'aretina lehibe toy ny fahasarotana amin'ny fisefoana, ny mpiasan'ny fahasalamana dia manomboka amin'ny fifantohana amin'ny fatran'ny oxygen ao amin'ny marary, ny tosidra ary ny habetsaky ny tsiranoka ao amin'ny havokavony — amin'ny ezaka rehetra mitazona ny toetran'izy ireo milamina. Miezaka koa izy ireo mifehy ny tazo, izay mety hiteraka tsy fahazoana aina ary hiteraka fahasimban'ny sela.
Ny tranga faran'izay mafy indrindra amin'ny COVID-19 dia mitaky ny fametrahana marary amin'ny ventilator mekanika — fitaovana iray izay mivezivezy rivotra miditra sy mivoaka avy ao amin'ny havokavoky ny olona — mandritra ny herinandro mahery isaky ny mandeha. Izany no mahatonga ny tompon'andraikitra ara-pahasalamana miahiahy momba ny tsy fahampian'ny rivotra. Ny Society of Critical Care Medicine dia nilaza fa hatramin'ny 200,000 19 ny ventilatera misy any amin'ny hopitaly amerikana, saingy ny sasany kosa efa antitra kokoa ary mety tsy mahomby amin'ny fitsaboana COVID-900,000. Mandritra izany fotoana izany, tombana tombatombana iray milaza fa 19 mahery ny Amerikanina afaka mahazo COVID-XNUMX ary mila ventilator.
Ny tranga ratsy indrindra amin'ny COVID-19 dia mety hiteraka ilay antsoina hoe syndrome respiratory depression (ARDS), maratra havokavoka mahery vaika izay mety ateraky ny karazana aretina maro. Ny hopitaly dia manana fomba voafaritra tsara amin'ny fomba fitantanana ARDS. Ny marary dia tokony hapetraka amin'ny vavony mba hanatsarana ny fahafahan'ny havokavoka miditra amin'ny rivotra ary tsy homena rano be loatra. Ho fanampin'izany, ny ventilators ho an'ny mararin'ny ARDS dia tokony hapetraka hanodina ny habetsaky ny rivotra ambany, hampihena ny fihenjanana amin'ny alveoli, ireo zana-kazo madinidinika ao amin'ny havokavoka
Ao anatin'ny efitranon'ny hopitaly dia mitandrina ny mpiasa mba hampihena kely ny fampiasana fitaovana mety hamoaka ny vongan-tsofina, toy ny fitaovana fanampiana oksizenina manosika ny rivotra hiditra ao amin'ny havokavoka. Ny hopitaly hafa dia mampiasa fitandremana fanampiny miaraka amin'ireo fitaovana antsoina hoe nebulizers, izay manova ireo fanafody ranon-javatra ho zavona miaina, satria ny zavona dia mety hampiakatra ny SARS-CoV-2 any ambony. (Ity no antony mahatonga ny savony ho tsara kokoa raha tsy mandony amin'ny ady atao amin'ny coronavirus.)
Ireo mpikaroka sy dokotera eran'izao tontolo izao dia mihazakazaka mba hitsapana tsara raha toa ka misy fanafody isan-karazany efa misy mialoha ny hiadiana amin'ny COVID-19. Ny dokotera nitafan'ny National Geographic dia naneho ny fanantenana lehibe indrindra momba ny remdesivir, fanafody antivirus novokarin'ny Science Science.
"Ny hany hanantonako ny satroko dia remdesivir," hoy i Perlman.
Remdesivir dia miasa amin'ny alàlan'ny fanahafana ny vatan'ny RNA viral, manakana ny fahafahan'ny viriosy hihamaro. Ny fanadihadiana sinoa iray be mpahalala, navoaka tamin'ny 4 febroary tao amin'ny Cell Research, dia nitatitra fa ny remdesivir dia nanakorontana ny famerenana ny SARS-CoV-2 ao amin'ny laboratoara. Saingy mbola andrana ihany ity zava-mahadomelina ity ary efa niaina fihemorana taloha. Remdesivir dia novolavolaina mba hiadiana amin'ny Ebola, saingy tsy nahomby ny fitsapana ny klinika tamin'ny olombelona.
Na eo aza izany, ny fitadiavana fitsaboana azo atao dia mitaky fitsapana ara-pahasalamana voafehy mafy, izay mila fotoana kely hitondrana. "Raha dinihina, tsara kokoa raha toa ka nanao ezaka bebe kokoa amin'ny fanafody anti-coronavirus isika," hoy i Perlman nanampy. “Mora ny miteny izao, [fa] dimy volana lasa izay, tsy dia mora loatra.”
Vonona handray fivoriana COVID19 Brainstorming? Inona ny tohin'ny fitsangatsanganana sy fizahantany?
Nihetsika avy hatrany ny minisitry ny fizahan-tany any Sierra Leone Pratt mba hitazomana ny COVID-19 hivoaka